Amniga - AOOD Technology Limited
Nidaamyada amniga ee casriga ah ayaa sii kordhaya dalabka warshadaha, codsiyada ganacsiga iyo milatariga sida amniga ganacsiga iyo kaabayaasha, amniga gaadiidka iyo aragtida habeenka, doonyaha madadaalada, dabagalka dab -damiska, dabagalka millateriga & ogaanshaha & raadraaca. Si loo gaaro dabagalka & bartilmaameedka helitaanka iyo ujeedka raadraaca, nidaam fiidyow oo iswaafajiya ayaa loo baahan yahay in la dhiso si loo soo saaro sawirro ama cajalado. Ubucda nidaamyadan fiidyowyada casriga ah, dhammaan awoodda, signalada iyo xogta waxaa lagu dhex mariyaa nidaamka giraanta siibashada. Waxay bixisaa 360 ° gudbinta aan dhammaadka lahayn ee tiro badan oo sawirro ah ama duubis ah oo ka soo jeedda meerto ilaa qayb go'an oo ka fogow fiilooyinka qaloocda marka aad wareegeyso. Taasi waa sababta nidaamka fiidiyaha modem -ka uu yahay dalabka ugu weyn ee loo baahan yahay siddooyinkii siibashada.
Alaabooyinka la xiriira: Kaabsool Slip Sings, Qeexitaan Slip Qeexid Sare, Siddo simbiriirixan Ethernet